03.02.20 Morning Nepali Murli Om Shanti BapDada Madhuban
“ मीठे बच्चे– तिम्रो कर्तव्य हो घर-घरमा बाबाको सन्देश दिनु , कुनै पनि हालतमा युक्ति रचेर बाबाको परिचय हरेकलाई अवश्य देऊ।”
तिमी बच्चाहरूलाई कुन एउटा कुराको सोख हुनु पर्छ?
जुन नयाँ-नयाँ प्वाइन्टहरू निस्किन्छन्, तिनलाई आफूसँग नोट गर्ने सोख हुनु पर्छ किनकि यतिका सबै प्वाइन्टहरू याद रहन मुश्किल हुन्छ। नोट लेखेर फेरि कसैलाई सम्झाउनु पर्छ। यस्तो पनि होइन, नोट लेखेर कापीमा नै रहिरहोस्। जुन बच्चाहरूले राम्ररी बुझ्छन्, उनीहरूलाई नोट गर्ने धेरै सोख हुन्छ।
लाख जमाने वाले...।
प्यारा रूहानी बच्चाहरूले गीत सुन्यौ। रूहानी बच्चे, यो अक्षर एक बाबाले नै भन्न सक्नुहुन्छ। रूहानी बाबा बाहेक कहिल्यै कसैले कसैलाई रूहानी बच्चाहरू भन्न सक्दैन। बच्चाहरूले जानेका छन्– सबै आत्माहरूका बाबा एउटै हुनुहुन्छ, हामी सबै भाइ-भाइ हौं। गायन पनि छ, ब्रदरहुड, फेरि पनि मायाको प्रवेशता यस्तो छ, जसकारण परमात्मालाई सर्वव्यापी भनिदिन्छन् अनि फादरहुड हुन पुग्छ। रावण राज्य पुरानो दुनियाँमा नै हुन्छ। नयाँ दुनियाँमा राम राज्य अथवा ईश्वरीय राज्य भनिन्छ। यो बुझ्ने कुरा हो। दुई राज्य अवश्य छन्– ईश्वरीय राज्य र आसुरी राज्य। नयाँ दुनियाँ र पुरानो दुनियाँ। नयाँ दुनियाँ अवश्य बाबाले नै रच्नुहुन्छ। यस दुनियाँमा मनुष्यहरूले नयाँ दुनियाँ र पुरानो दुनियाँलाई पनि बुझ्दैनन् अर्थात् केही पनि जानेका छैनन्। तिमीले पनि केही जान्दैनथ्यौ, बेसमझ थियौ। नयाँ सुखको दुनियाँ कसले स्थापना गर्छ फेरि पुरानो दुनियाँमा दु:ख किन हुन्छ? स्वर्गबाट नर्क कसरी बन्छ? यो कसैलाई पनि थाहा छैन। यी कुरालाई त मनुष्यले नै जानेका छन्। देवताहरूका चित्र छन् भने अवश्य आदि सनातन देवी देवताहरूको राज्य थियो। यस समयमा यो छैन। यो हो प्रजाको प्रजामाथि राज्य। बाबा भारतमा नै आउनु हुन्छ। मनुष्यहरूलाई यो पनि थाहा छैन, शिवबाबा भारतमा आएर के गर्नुहुन्छ। आफ्नो धर्मलाई नै भुलिसकेका छन्। तिमीहरूले अब परिचय दिनु छ त्रिमूर्ति र शिव बाबाको। ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता भन्छन् फेरि भन्छन् शिव परमात्माए नम:। त्यसैले तिमी बच्चाहरूले त्रिमूर्ति शिवको नै परिचय दिनु छ। यस्तो-यस्तो सेवा गर्नु छ। कुनै पनि हालतमा बाबाको परिचय सबैलाई मिल्नु पर्छ। तब बाबाबाट वर्सा लिन सक्छन्। तिमीलाई थाहा छ– हामीले अहिले वर्सा लिइरहेका छौं। अरू पनि धेरैले वर्सा लिनु छ। हामी माथि जिम्मेवारी छ घर-घरमा बाबाको सन्देश दिने। वास्तवमा मेसेन्जर एक बाबा मात्रै हुनुहुन्छ। बाबाले आफ्नो परिचय तिमीलाई दिनुहुन्छ। तिमीले फेरि अरूलाई बाबाको परिचय दिनु छ। बाबाको ज्ञान दिनु छ। मुख्य हो त्रिमूर्ति शिव, उहाँको नै राष्ट्रिय छाप (कोट अफ आर्मस्) पनि बनाएको छ। सरकारले यसको यथार्थ अर्थ जान्दैन। त्यसमा चक्र पनि दिइएको छ चर्खा जस्तै। त्यसमा फेरि लेखिएको छ सत्य मेव जयते। यसको अर्थ त खुल्दैन। यो त संस्कृत अक्षर हो। अब बाबा त हुनुहुन्छ नै सत्य । उहाँले जुन कुरा सम्झाउनु हुन्छ, त्यसबाट तिम्रो विजय हुन्छ, सारा विश्वमा। बाबा भन्नुहुन्छ– म सत्य भन्छु, तिमी यस पढाइबाट सत्य-सत्य नारायण बन्न सक्छौ। अरू मानिसले त के-के अर्थ निकाल्छन्। त्यो पनि उनीहरूसँग सोध्नुपर्छ। बाबाले त अनेक प्रकारले सम्झाउनु हुन्छ। जहाँ-जहाँ मेला लाग्छ, त्यहाँ नदीहरूमा पनि गएर सम्झाऊ। पतित-पावन गंगा त हुन सक्दैन। नदीहरू सागरबाट निस्केका हुन्। त्यो हो पानीको सागर त्यसबाट पानीको नदी निस्किन्छ। ज्ञान सागरबाट ज्ञानका नदी निस्किन्छन्। तिमी माताहरूमा अब ज्ञान छ। गौमुखमा जान्छन्, उनको मुखबाट पानी निस्किन्छ, सम्झन्छन्– यो गंगाको जल हो। यति पढे-लेखेका मनुष्यले पनि सम्झदैनन्, यहाँ गंगा जल कहाँबाट निस्किन्छ? शास्त्रमा उल्लेख छ– बाण हाने अनि गंगा निस्क्यो। अब यो हो ज्ञानको कुरा। यस्तो होइन, अर्जुनले बाण हाने अनि गंगा निस्क्यो। कति टाढा तीर्थमा जान्छन्। भन्छन्– शंकरको जटाबाट गंगा निस्क्यो, जसमा स्नान गर्नाले मनुष्यबाट परी बनिन्छ। मनुष्यबाट देवता बनिन्छ, यो पनि परी जस्तै हो।
अब तिमी बच्चाहरूले बाबाको नै परिचय दिनु छ त्यसैले बाबाले यी चित्र बनाउनु भएको हो। त्रिमूर्ति शिवको चित्रमा सारा ज्ञान छ। केवल उनीहरूको त्रिमूर्तिको चित्रमा ज्ञान दिनेवाला शिवको चित्र छैन। ज्ञान लिनेको चित्र छ। अहिले तिमीले त्रिमूर्ति शिवको चित्रमा सम्झाउँछौ। माथि हुनुहुन्छ ज्ञान दिनेवाला। ब्रह्मालाई उहाँबाट ज्ञान मिल्छ जुन फेरि फैलाउँछन्। यसलाई भनिन्छ ईश्वरीय धर्म स्थापनाको अभियान (मेशीनरी)। यो देवी-देवता धर्म धेरै सुख दिनेवाला छ। तिमी बच्चाहरूलाई आफ्नो सत्य धर्मको पहिचान मिलेको छ। तिमीलाई थाहा छ– हामीलाई भगवानले पढाउनु हुन्छ। तिमी कति खुशी हुन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ– तिमी बच्चाहरूको खुशीको सीमा नै छैन किनकि तिमीलाई पढाउनेवाला स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। भगवान त निराकार शिव हुनुहुन्छ, नकि श्रीकृष्ण। बाबा बसेर सम्झाउनु हुन्छ सर्वका सद्गति दाता एक हुनुहुन्छ। सद्गति सत्ययुगलाई भनिन्छ, दुर्गति कलियुगलाई भनिन्छ। नयाँ दुनियाँलाई नयाँ, पुरानो दुनियाँलाई पुरानो नै भनिन्छ। मनुष्यले सम्झन्छन्– दुनियाँलाई पुरानो हुन अझ ४० हजार वर्ष लाग्छ। कति अलमलमा परेका छन्। बाबा बाहेक यी कुरा कसैले सम्झाउन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ– म तिमी बच्चाहरूलाई राज्य-भाग्य दिएर बाँकी सबैलाई घरमा लिएर जान्छु, जो मेरो मतमा चल्छन् ती देवता बन्छन्। यी कुरा तिमी बच्चाहरूले नै बुझेका छौ, नयाँ कसैले के बुझोस्।
तिमी मालीहरूको कर्तव्य हो बगैंचा बनाएर तयार गर्नु। बागवानले त निर्देशन दिनुहुन्छ। यस्तो पनि होइन बाबाले कुनै नयाँसँग मिलेर ज्ञान दिनुहुन्छ। यो काम मालीहरूको हो। सम्झ, बाबा कलकत्तामा जानु भयो भने बच्चाहरूले सम्झन्छन् हामी आफ्ना अफिसरहरू, फलानो मित्र आदिलाई बाबाको पासमा लिएर जाऔं। बाबा भन्नुहुन्छ– उनीहरूले त केही पनि बुझ्दैनन्। मानौं बुद्धूलाई सामुन्ने बसाएको छ, त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ– नयाँलाई कहिल्यै बाबाको सामुन्ने नल्याऊ। यो त तिमी मालीको काम हो, नकि बागवानको। मालीको काम हो बगैंचा तयार गर्नु। बाबा त निर्देशन दिनुहुन्छ– यस्तो-यस्तो गर। त्यसैले बाबा नयाँहरूसँग कहिल्यै भेट्नु हुन्न। तर कहीं अतिथि भएर घरमा आउँछन् भने भन्छन् दर्शन गरौं। तपाईं हामीलाई किन भेट्न दिनुहुन्न? शंकराचार्य आदिको पासमा कति जान्छन्। आजकल शंकराचार्यको उच्च स्थान छ, पढे-लेखेका छन्, फेरि पनि जन्म त विकारबाट नै लिन्छन् नि। ट्रस्टीहरूले गद्दीमा कसैलाई पनि बसाउँछन्। सबैको मत आ-आफ्नो छ। बाबा स्वयं आएर बच्चाहरूलाई आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ, म कल्प-कल्प यस पुरानो तनमा आउँछु। यिनले पनि आफ्नो जन्मलाई जानेका छैनन्। शास्त्रमा त कल्पको आयु नै लाखौं वर्ष बताएका छन्। मनुष्यले त यति धेरै जन्म लिन सक्दैनन् फेरि जनावर आदिका पनि योनिहरू मिलाएर ८४ लाख बनाएका छन्। मनुष्यले त जो सुन्छन् त्यो सबै सत्य-सत्य भनिरहन्छन्। शास्त्रमा त सबै छन् भक्तिमार्गका कुरा। कलकत्तामा देवीहरूका धेरै राम्रा, सुन्दर मूर्ति बनाउँछन्, सजाउँछन्। फेरि तिनलाई डुबाइदिन्छन्। यो पनि गुडियाको पूजा गर्ने बच्चाहरू नै भए। बिलकुल अज्ञानी। तिमीलाई थाहा छ– यो हो नर्क। स्वर्गमा त अथाह सुख थियो। अहिले पनि कोही मर्छ भने भन्छन् फलानो स्वर्ग गयो। त्यसैले अवश्य कुनै समयमा स्वर्ग थियो, अहिले छैन। नर्कपछि फेरि अवश्य स्वर्ग आउँछ। यी कुरा पनि तिमीलाई थाहा छ। मनुष्यले त अलिकति पनि जानेका छैनन्। त्यसैले नयाँ कोही बाबाको सामुन्ने बसेर के बुझ्छ, त्यसैले माली चाहिन्छ जसले पूरा पालना गरोस्। यहाँ त माली पनि धेरै चाहिन्छन्। मेडिकल कलेजमा कुनै नयाँ गएर बस्यो भने केही पनि बुझ्दैन। यो ज्ञान पनि नयाँ हो। बाबा भन्नुहुन्छ– म आएको छु सबैलाई पावन बनाउन। मलाई याद गर्यौ भने पावन बन्छौ। यस समयमा सबै तमोप्रधान आत्माहरू छन्। त्यसैले त भन्छन् आत्मा नै परमात्मा, सबैमा परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबा यस्तासँग बसेर कहाँ मेहनत गर्नुहुन्छ र? यो त तिमी मालीहरूको काम हो– काँडालाई फूल बनाउने।
तिमीलाई थाहा छ– भक्ति हो रात, ज्ञान हो दिन। गायन पनि छ– ब्रह्माको दिन, ब्रह्माको रात। प्रजापिता ब्रह्माका त अवश्य बच्चाहरू हुनुपर्छ। कसैलाई यति पनि समझ छैन, जसले सोधून् यतिका ब्रह्माकुमार-कुमारीहरू छन्, यिनका ब्रह्मा को हुन्? अरे प्रजापिता ब्रह्मा त प्रसिद्ध छन्, उहाँद्वारा नै ब्राह्मण धर्मको स्थापना हुन्छ। भनिन्छ पनि ब्रह्मा देवताए नम:। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई ब्राह्मण बनाएर फेरि देवता बनाउनु हुन्छ।
जो नयाँ-नयाँ प्वाइन्टहरू निस्किन्छन्, तिनलाई आफूसँग नोट राख्ने सोख बच्चाहरूमा हुनु पर्छ। जो बच्चाहरूले राम्ररी सम्झन्छन् उनीहरूलाई नोट गर्ने धेरै सोख हुन्छ। नोट राख्नु राम्रो हो किनकि यतिका प्वाइन्टहरू याद रहन मुश्किल हुन्छ। नोट लिएर फेरि कसैलाई सम्झाउनु पर्छ। यस्तो पनि होइन लेखेर फेरि कापीमै रहिरहोस्। नयाँ-नयाँ प्वाइन्टहरू मिलिरहन्छन् त्यसैले पुराना प्वाइन्टहरूका कापी यत्तिकै रहिरहन्छ। स्कुलमा पनि पढ्दै जान्छन्, पहिलो कक्षाको किताब रहिरहन्छ। जब तिमीले सम्झाउँछौ, अन्त्यमा यो सम्झाऊ मनमनाभव। बाबा र सृष्टि-चक्रलाई याद गर। मुख्य कुरा हो एक मलाई याद गर, यसलाई नै योग अग्नि भनिन्छ। भगवान हुनुहुन्छ ज्ञानका सागर। मनुष्य छन् शास्त्रका सागर। बाबाले कुनै शास्त्र सुनाउनु हुन्न, उहाँले पनि शास्त्र सुनाउनु भयो भने भगवान र मनुष्यमा के फरक रह्यो? बाबा भन्नुहुन्छ– यी भक्तिमार्गका शास्त्रहरूको सार म तिमीलाई सम्झाउँछु।
ती मुरली बजाउने सपेराले सर्पलाई समात्छन् अनि त्यसको दाँत निकालिदिन्छन्। बाबाले पनि तिमीबाट विष पिलाउन छुटाइदिनु हुन्छ। यसै विषबाट नै मनुष्य पतित बनेका हुन्। बाबा भन्नुहुन्छ– यसलाई छोड‚ तैपनि छोड्दैनन्। बाबाले गोरो बनाउनु हुन्छ फेरि पनि गिरेर कालो मुख गर्छन्। बाबा आउनु भएको छ तिमीलाई ज्ञान चितामा बसाउन। ज्ञान चितामा बस्नाले तिमी विश्वको मालिक, जगतजित बन्छौ। अच्छा!
मीठे-मीठे सिकीलधे बच्चाहरूप्रति माता–पिता बापदादाको याद-प्यार एवं गुडमर्निङ्ग। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुडमर्निङ्ग, नमस्ते।
१) सधैं खुशी रहोस्– हामी सत्य धर्मको स्थापनाका निमित्त हौ। स्वयं भगवानले हामीलाई पढाउनु हुन्छ। हाम्रो देवी-देवता धर्म धेरै सुख दिनेवाला हो।
२) माली बनेर काँडाहरूलाई फूल बनाउने सेवा गर्नु छ। पूरा पालना गरेर फेरि बाबाको सामुन्ने ल्याउनु छ। मेहनत गर्नु छ।
ह र शक्तिलाई कार्यमा लगाएर वृद्धि गर्ने श्रेष्ठ धनवान् वा समझदार भव
समझदार बच्चाले हरेक शक्तिलाई कार्यमा लगाउने विधि जान्दछ। जसले जति शक्तिहरूलाई कार्यमा लगाउँछ, त्यति त्यो शक्ति वृद्धि हुन्छ। यस्तो ईश्वरीय बजेट बनाऊ जसबाट विश्वका हरेक आत्माले तिमीद्वारा केही न केही प्राप्ति गरेर तिम्रो गुणगान गरुन्। सबैलाई केही न केही दिनु नै छ। चाहे मुक्ति देऊ, चाहे जीवनमुक्ति देऊ। ईश्वरीय बजेट बनाएर सबै शक्तिहरूको बचत गरेर जम्मा गर अनि जम्मा भएको शक्तिद्वारा सर्व आत्माहरूलाई भिखारीपनबाट, दु:ख अशान्तिबाट मुक्त गर।
शुद्ध संकल्पहरूलाई आफ्नो जीवनको अनमोल खजाना बनायौ भने मालामाल बन्छौ।